Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka oo bilaabay iney booqdaan degaanadii laga soo doortay – Kalfadhi
Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka oo bilaabay iney booqdaan degaanadii laga soo doortay
Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa bilaabay iney ku laabtaan degaanadii laga soo doortay maadaama lagu jiro xiliga fasaxa Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanada ayaa qaar ka mid ah durba ku laabtay degaanadii laga soo doortay waxayna bilaabeyn iney la kulmaan qeybaha bulshada iyo odayaasha dhaqanka, sidoo kale waxay sheegeyn iney la kulmeyn maamulada ka jira goobihii ay booqdeen.
Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim oo ka mid ah Xildhibaanadda Golaha Shacabka ee ku laabtay degaanadii laga soo doortay ayaa Kalfadhi u sheegay in uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah Waxgaradka, Culimadda, Haweenka iyo Dhalinyaradda Magaaladda Baladwayne oo ah degaankii laga soo doortay.
“waxaan ku laabtay Beledweyne oo ah degaankii layga soo doortay waxaana la kulmay dad kala duwan oo ay ku jiraan odayaasha dhaqanka iyo ururada dhalinyarada iyo Haweenka”, ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim. “Waxaa kala hadlay dadkii isoo doortay Xaaladaha nabad-galayada, caafimaadka, horuumarinta waxbarashada iyo abaaraha” ayuu yiri Xildhibaan Cabdilfitaax Qaasim oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya
Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim ayaa sheegay in Gobolka Hiiraan uu ka mid yahay Goboladda ay ka jiraan Colaadaha iyo abaaraha daran, Odayaasha dhaqankana ay usoo gudbiyeen cabashooyin badan dhawaana uu Xukuumada horgeyn doono si wax looga qabto dhibaatooyinka gobolka ka jira.
“Inta badan waxgaradkii aan la kulmay waxay igala hadleen nolosha oo adag, abaaro iyo Wabiga oo sii gurayo” ayuu yiri Cabdifitaax Qaasim oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya. “Waxay iisoo dhibaaeen baaq iyo codsi waxaana u gudbin doonaa Xukuumadda iyo cid kasta oo wax ka gasha”, ayuu hadalkiisa ku gaba-gabeeyay Cabdifitaax Qaasim oo la hadlay Kalfadhi.
Waxaa jira Xildhibaano kale oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo gaaray degaanadii laga soo doortay iyo qaar kale oo aan weli u bixin degaan doorashadooda. Sidoo kale waxaa jira xildhibaano sheegay in aysan awoodin iney booqdaan degaanadii laga soo doortay sababo la xariira dhinaca amaanka balse ay meelo kale kula kulmaan odayaasha iyo siyaasiinta degaanka waxna ay ka weydiiyaan xaaladda ka jirta degmooyinkii iyo goboladii laga soo doortay.
Xildhbadan Maxamed Cumar Dalxa ayaa ka mid Xubnaha aan awoodin iney ku laabtaan degaanadii laga soo doortay sababo la xariiro amaanka, Xildhibaanka ayaa sheegay in degaankii laga soo doortay ay ka jirto qatar amni balse uu la kulmay odayaasha iyo siyaasiinta degaanka. Sidoo kalane uu la kumay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka taliya degaankii laga soo doortay.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa sheegay inuu gaaray magaalada Baydhabo halkaasi uu kula kulmay Odayaasha dhaqanka Afgooye iyo maamulka ka jira islamarkaana ka wareestay xaaladda degaankii laga soo doortay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ” Waxaan Baydhabo Kula kulmay Suldaan kayga oo ka yimid Afgooye, dhalinyarada degmada iyo Haweenka waxana ka sheekeysanay xaaladda degmada iyo sidii loo hormarin lahaa”, ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Waxaa jira Xildhibaano kale oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo hada ku sugan degaanadii laga soo doortay ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, waxaa ka mid ah Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka oo hada safaro ku marayo degaanadii laga soo doortay ee maamulka Puntland. Xildhibaanadaan ayaa ka qeyb galay Munaasabadii caleema-saarka Madaxweyne Deni waxayna kadib ay bilaabeyn iney la kulmaan dadka degaanka si ay warbixino uga dhageestaan xaaladda ka jirta degaanadii laga soo doortay.
Xildhibaan Mahad Salaad: Hadalka Yoweri Museveni waxa uu ka tarjumayaa waxa soo socda
Xildhibaan Fiqi: Shacabka iyo Madaxda Puntland waxaan kala kulanay soo dhoweyn heer sarreysa iyo maamuus walaaltinimo